I-villa yeholide eyingqayizivele emvelweni nasemfuleni. - I-Airbnb
I-villa yeholide eyingqayizivele emvelweni nasemfuleni.
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Steven
I-Maison Roannay itholakala e-Le Roannay, i-tributary ye-Amblève. I-villa yakhiwa ngenhlonipho enkulu ngezindawo ezizungezile futhi inikeza indawo enhle yokungcebeleka. Amakamelo okulala angu-5 namagumbi okugezela angu-4 anikeza ukunethezeka okudingekayo. Igumbi lokuphumula elinekhishi elivulekile, indawo yokubasa umlilo nendawo enkulu yokuhlala iyindawo yokuhlala ethokomele. Ekhishini elinakho
konke, ungenza noma yisiphi isidlo sibe idili. Igumbi lokudlala elihlukile ne-TV linikeza izingane ithuba lokuphumula ngemva kosuku olusebenzayo.
Indawo ethulile ehlukile yendlu ikuyisa emvelweni. Ehlelwe esakhiweni esikhulu phakathi kohlangothi lwehlathi nomfudlana "we-Le Roannay", uzozizwa sengathi uhlala emvelweni, ngaphandle kokuthi ube phakathi nendawo. Izindlela zokuhamba ngezinyawo nezamabhayisikili zishiya endlini. I-villa iklanywe ngokucophelela, lapho ukunaka umoya nokusetshenziswa kwezinto zemvelo kuzokwenza uzizwe 'usekhaya' ngokushesha.
ubusuku obungu-7 e- Stoumont
Indawo ezungezile yase-Moulin de Ruy inokuningi ongakunikeza.
Kokubili imvelo enhle kanye nemizana yamaphupho endaweni inikeza ukuphumula okudingekayo. Ufuna okokuzijabulisa okwengeziwe? Kulesi simo, uzokwazi nokuzijabulisa esifundeni. Ukugwedla ngesikebhe, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo konke kuseduze. Noma uma ufuna ukuzwa inhlalakahle enhle yindawo edumile ye-Spa ekhoneni, futhi isekisi elidumile le-Spa-Francorchamps liseduze.
Siphila ibanga elifushane ngokwethu, kodwa omakhelwane bethu (u-Hans no-Eric) nabo bazokwamukela egameni lethu futhi bakuvuse. Ungaphinde uze kubo ngemibuzo.